International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ကာကွယ်ပေးခြင်းကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား မဖြစ်မနေ သွေးသစ်လောင်းရမည်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ကာကွယ်ပေးခြင်းကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား မဖြစ်မနေ သွေးသစ်လောင်းရမည်
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့
ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့၊ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ၊ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူများအဖွဲ့၊ အနာဂတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ်၊ မျိုးဆက်လှိုင်း၊ စစ်မှန်သော ပြည်သူ့ကျေးကျွန်အဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့၊ မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး - ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လောကအလင်း၊ စမိုင်းလ်ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် Synergy (Social Harmony Organization) တို့မှ ထုတ်ပြန်သည်။
(ရန်ကုန် - ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် (MNHRC) ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လက်ရှိကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ တွေးခေါ်ပုံ အလေ့အထများသည် လူ့ခွင့်အရေးကို ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် မြှင့်တင် ပေးရေးများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အဟန့်အတားသဖွယ် ဖြစ်နေသည့်အပြင် အဆိုးဆုံးမှာ မြန်မာစစ်တပ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် MNHRC သည် ဒိုင်းသဖွယ်အသုံးချခြင်း ခံနေရသည်ဟု အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့မှ ယနေ့ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအသစ် တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ MNHRC အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်ကိုလည်း ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် တောင်းဆိုထားပါသည်။
"တကယ်အရေးပါတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုချိန်ထိ MNHRC ကနေပြီး တော့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်တာ မရှိသလောက်ပါပဲ။" ဟု စစ်မှန်သောပြည်သူ့ ကျေးကျွန်အဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာ သွင်လင်းအောင်မှ ပြောသည်။ "အခုဆို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံနေရတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ သမိုင်းမှာ အင်မတန် အရေးပါတဲ့ကာလတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်တို့ရဲ့ လွမ်းမိုးမှုအောက်ကနေလွတ်ကင်းပြီး သမာသမတ်ကျကျနဲ့ စွမ်းဆောင် ရည်ရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တစ်ခု ခုချိန်မှာ အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တောင် လိုအပ်နေ ပါတယ်။" ဟု ၎င်းကဆက်ပြောပါသည်။
"သက်ဆိုင်သူထံပြန်ပို့ရန် - မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ထံသို့ ပြန်လည်တင်သွင်းရမည်" အမည်ရှိ အစီရင် ခံစာသည် အာရှဒေသ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ဌာနများဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions – ANNI) ၏ အာရှဒေသ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဌာနများ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြထားသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာမှ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော အခန်းဖြစ်သည်။ ယခုအစီရင်ခံစာတွင် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ဌာနများအနေဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံနှုန်းများ အတိုင်း MNHRC မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အား ၎င်းစတင်တည်ထောင်ချိန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြန်လည် သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ ပါရီအခြေခံမူများ (Paris Principles) တွင် သတ်မှတ်ထားသော အဓိက အချက်များမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝမှု၊ ဥပဒေပြဌာန်းချက် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဖြင့် အာမခံထားပြီး အစိုးရထံမှ အမှီခိုကင်းမှုနှင့် လွတ်လပ်မှု၊ အလွှာစုံမှု၊ လုံလောက် သောရင်းမြစ်များနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် လုံလောက်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ ဖြစ်ပါသည်။
"MNHRC ရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်တွေကတော့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ရွေးချယ် ခန့်အပ်တဲ့အခါ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကနေ ကင်းလွတ် တဲ့ ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှုမျိုး မလုပ်နိုင်တာဘဲဖြစ်တယ်။" ဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့၏ သုတေသန ညွှန်ကြားရေးမှူး Alex Moodie က ပြောသည်။ "MNHRC အနေနဲ့ လွတ်လပ်အမှီခိုကင်းပြီး ထိရောက်လာစေဖို့ ပါရီအခြေခံမူမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကို လေးစား လိုက်နာတဲ့ ကော်မရှင်မျိုးဖြစ်ဖို့က လွှတ်တော်အနေနဲ့ ကော်မရှင်ဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။" ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော အခြေအနေ များတွင် ဥပမာ ကိုပါကြီးနှင့် ဘရန်ရှောင်တို့၏ အမှုများ၌ ကော်မရှင်၏ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပုံနမူနာအရ MNHRC မှ မြန်မာအစိုးရ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ များအား ထိခိုက်စေမည့် သို့မဟုတ် သိက္ခာကျစေမည့် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းများအား ရှောင်ကျဉ်မှုများ ရှိနေသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် MNHRC သည် စစ်တပ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
"မြန်မာစစ်တပ်က ရခိုင်၊ ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တို့လို ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေက အရပ်သားလူထုအပေါ် ဆိုးရွားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျူးလွန်နေတယ်။" ဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အောင်ခိုင်မင်းက ပြောသည်။ "ဒါပေမယ့် ကော်မရှင်အနေနဲ့ အဲလိုပြစ်မှု ကျူးလွန်တဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့တွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူလုပ်ဆောင်တာမျိုး ဘာမှမရှိဘူး။" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
စစ်မှုထမ်းဟောင်းနှစ်ဦးပါဝင်သည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တွေးခေါ်ပုံ အသိတရား ခေါင်းပါးမှုကို ဤအစီရင်ခံစာမှ မီးမောင်းထိုး တင်ပြထားပါသည်။ "အခုလက်ရှိ ကော်မရှင်က လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံသဘောတရား တွေကို နားလည်းမလည်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံ နောက်ခံလည်း မရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်မြှင့်တင် ပေးနိုင်မလဲ။" ဟု ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီမှ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေးမှူးဖြစ်သူ သဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်မှ ပြောပါသည်။ "လက်ရှိကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သက်တမ်းက ၂၀၁၉ မှာ ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချိန်က ကော်မရှင်ကို လူ့အခွင့်အရေး အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီး သမာသမတ်ကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ သွေးသစ်လောင်းဖို့ အချိန်ကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။" ဟုလည်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
MNHRC ၏ အမှီအခိုကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုများကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင် ဥပဒေတွင် အရေးပါသော ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများအား လွှတ်တော်မှ လုပ်ဆောင်ရန် ဤအစီရင် ခံစာကို ပါဝင်ပြုစုရေးသားသော အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့မှ အကြံပြု တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် MNHRC မှ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုတက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ချိုးဖောက်မှုများ၌ စစ်တပ်မှ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် တိုင်အောင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ပိုဆိုးမလာစေရေး၊ ချိုးဖောက်ခံရသူများ ထပ်မံနစ်နာမှု များ မရှိစေရေးအတွက် ပဋိပက္ခအခြေအနေကို ပိုမိုနားလည်မှုရှိရှိ အမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အကြံပြုထားပါသည်။
အောင်ခိုင်မင်း၊ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့
+၉၅ (၀) ၉၂ ၆၁၀၀ ၉၉၉၅၊ akm@progressive-voice.org (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
Alex Moodie၊ သုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့
+၉၅ (၀) ၉၇ ၈၀၀၉ ၆၄၄၀၊ alex@progressive-voice.org (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
သဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှူး၊ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ
+၉၅ (၀) ၉၇ ၉၅၅၇ ၄၇၇၅၊ thinzarshunleiyi@gmail.com (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
သွင်လင်းအောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ စစ်မှန်သောပြည်သူ့ကျေးကျွန်အဖွဲ့
+၉၅ (၀) ၉၂ ၅၀၇၉ ၅၉၁၅၊ thwinlinnaung.gps@gmail.com (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
ဤအစီရင်ခံစာကို ရေးသားထုတ်ဝေသူများမှာ - ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ (PV)၊ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ (ACDD)၊ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူများအဖွဲ့ (BM)၊ အနာဂတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ် (FLC)၊ မျိုးဆက်လှိုင်း (GW)၊ စစ်မှန်သော ပြည်သူ့ ကျေးကျွန်အဖွဲ့ (GPS)၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ (HRDP)၊ မွန်ပြည် လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း (HURFOM)၊ ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး - ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT)၊ လောကအလင်း (Loka Ahlinn)၊ စမိုင်းလ်ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း (Smile) နှင့် Synergy (Social Harmony Organization) တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤအစီရင် ခံစာသည် အာရှဒေသ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဌာနများဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions – ANNI) ၏ အာရှဒေသ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဌာနများ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြထားသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာမှ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော အခန်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။
အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။
By Progressive Voice, Action Committee for Democracy Development, Burma Monitor (Research and Monitoring), Future Light Center, Generation Wave, Genuine People's Servants, Association of Human Rights Defenders and Promoters, Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women's Association Thailand, Loka Ahlinn (Social Development Network), Smile Education and Development Foundation, and Synergy (Social Harmony Organization)
[Yangon –9October, 2018] The mandate laid out in the Myanmar National Human Rights Commission Law and the mindset of the current commissioners hinders the effective promotion and protection of human rights, and at its worst is being used asashield to protect the Myanmar military said 12 civil society organizations inanew report released today. The new report calls for the reform of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC).
"So far, the MNHRC has failed to take decisive action in almost all critical human rights cases and situations," said Thwin Linn Aung, Director of Genuine People's Servants. "Myanmar is facingacritical time in its history, with various human rights crises around the country. Now more than ever we needastrong, capable, and principled human rights institution that is independent from the Government and the military," he continued.
"Return to Sender - MNHRC Enabling Law Must be Returned to Parliament for Structural Reform," is the Myanmar chapter of the regional Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) 2018 report. It analyzes the performance of the MNHRC since its inception in 2011 based on the international standards for the functioning of national human rights institutions – the Paris Principles. The criteria set out in the Paris Principles are: mandate and competence, autonomy from the government and independence guaranteed by statute or constitution, pluralism, adequate resources, and adequate powers of investigation.
"The MNHRC has significant flaws that hinderatransparent and open selection process of commissioners that is free of executive influence." said Alex Moodie, Research Director of Progressive Voice. "Parliament needs to amend the law to ensure its compliance with the international standards set out in the Paris Principles so that it is independent and effective," he continued.
The report also finds that when in situations of armed conflict or violence, the MNHRC has refrained from publicly criticizing or doing anything to ruffle the feathers of the Myanmar armed forces, suggesting that it is still under its influence as the failures of the MNHRC in the cases of Brang Shawng and Ko Par Gyi demonstrate.
"The Myanmar military commits some of the worst widespread and systematic human rights abuses against civilians in conflict-affected ethnic areas, such as in Rakhine, Kachin and Shan States," said Aung Khaing Min, Executive Director of Progressive Voice. "Yet the MNHRC has not taken any decisive action against the perpetrators or the institution that is committing these crimes," he continued.
The report points to the lack ofahuman rights mindset of the commissioners whose backgrounds include two former military personnel. "How can the current commission effectively promote and protect human rights when they have no background or fundamental understanding of human rights issues." said Thinzar Shunlei Yi, Advocacy Coordinator of Action Committee for Democracy Development. "The terms of the current commissioners end in 2019, and it is time to reinvigorate the commission with more principled and experienced human rights figures," she continued.
The 12 authors of the report strongly recommend that the Parliament makes crucial amendments to the MNHRC Law in order to increase the independence and effectiveness of the body. Furthermore, they recommend MNHRC be more proactive and conflict-sensitive in promoting and protecting human rights, including when it is the military that is implicated in abuses.
+95 (0) 92 6100 9995, akm@progressive-voice.org (Burmese/English)
+95 (0) 97 8009 6440, alex@progressive-voice.org (English)
+95 (0) 97 9557 4775, thinzarshunleiyi@gmail.com (Burmese/English)
Thwin Linn Aung, Director, Genuine People's Servants
+95 (0) 92 5079 5915, thwinlinnaung.gps@gmail.com (Burmese/English)
The authors of this report are: Progressive Voice, Action Committee for Democracy Development, Burma Monitor (Research and Monitoring), Future Light Center, Generation Wave, Genuine People's Servants, Association of Human Rights Defenders and Promoters, Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women's Association Thailand, Loka Ahlinn (Social Development Network), Smile Education and Development Foundation, and Synergy (Social Harmony Organization). This report is the Myanmar chapter of the 2018 ANNI report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions.